परमेश्वरका थुमा (भाग २) – Word of Truth, Nepal
“त्यसलाई __________मा _____________!” उहाँले त्यस किसिमको कष्टदायी मृत्यु भोगोस् भन्ने उनीहरू चाहन्थे जुनचाहिँ सबैभन्दा खराब अपराधीहरूले भोग्थे(फिलिप्पी २:८ सित तुलना गर्नुहोस्)।
“___________बाहेक हाम्रो अरू __________ नै छैन”।
यहूदीहरू सिजरलाई घृणा गर्थे, उनीहरू रोमी शासनको जुवामुनि रहनै चाहँदैनथे तर ख्रीष्टलाई उनीहरूले त्यसभन्दा बढ्ता घृणा गरे। पापी मान्छेको उहिलेदेखिको नारा यही हो: “हामी परमेश्वरको शासनमुनि बस्न चाहन्नौं। हामीले के गर्नुपर्छ भनेर परमेश्वरको भनेको हामी सुन्न चाहन्नौं। हामी जे मन लाग्छ त्यही गर्न चाहन्छौं।” मान्छे आफू आफ्नै राजा बन्न खोजेको छ र आखिरमा कमारो बन्न पुगेको छ। परमेश्वरलाई राजा बन्न दिनेहरू मात्र साँच्चै स्वतन्त्र हुन्छन् (यूहन्ना ८:३१-३६)।
पिलातस अन्तमा यहूदीहरूको दबाबमुनि निहुरिए अनि उनीहरूकै मागलाई पूरा गरिदिए (यूहन्ना १९:१६)। येशूलाई क्रूसमा टँगाइने ठाउँलाई गलगथा भनिन्थ्यो जसको अर्थ हो “___________को ठाउँ” (यूहन्ना १९:१७)। कलवरी भन्ने शब्दको माने पनि खोपडी हो र यसले पनि उही ठाउँलाई जनाउँछ (लूका २३:३३ पढ्नुहोस्)। त्यस दिन ख्रीष्टसित कतिजना अपराधीहरू टाँगिए (यूहन्ना १९:१८)? ___________
अपराधीलाई क्रूसमा टँगाइँदा उसको अभियोग वा दोषलाई लेखेर उसकै शिरमाथि टाँगाइने चलन थियो। जस्तै, कसैले अर्कालाई जानाजानी मारेको भए त्यहाँ “यो हत्यारा हो!” भनेर लेखिन सक्थ्यो। येशूको शिरमाथि चाहिँ कस्तो अभियोग लेखियो (यूहन्ना १९:१९)? ________________________________________________। उक्त कुरा कतिओटा भाषामा लेखियो (यूहन्ना १९:२०)? __________ [टिप्पणी: प्यालेस्टाइनको स्थानीय भाषा हिब्रू वा अरामी थियो; रोमी साम्राज्यमा चल्ने साझा भाषाचाहिँ ग्रीक थियो र औपचारिक वा कानूनी भाषाचाहिँ ल्याटिन थियो कारण त्यतिखेर शासन उनीहरूको हातमा थियो]। येशू कुनचाहिँ ठूलो अपराधका दोषी हुनुहुन्थ्यो त? उहाँ “यहूदीहरूका राजा” हुनुहुन्थ्यो! यसरी लेखिएकोमा के यहूदीहरू खुशी थिए (यूहन्ना १९;२१)? ___________। के पिलातसले उनीहरूले चाहेको जस्तै गरी त्यसलाई बदले (यूहन्ना १९:२२)? ___________। यो उनीहरूसित साटो फेर्ने एउटा मौका बन्यो पिलातसको लागि। पिलातसले ठूलै हार खाएका थिए (येशूलाई छुटाउन असफल भएकाले) तर अब उनले एउटा सानै कुरामा भए पनि विजय हासिल गरेर छाडे। साथै उक्त पत्रद्वारा परमेश्वरको आवाजले बोलिरहेको पनि सुन्न सक्छौं। येशूले आफू राजा हुनुभएको केवल दाबीमात्र गर्नुभएको होइन, उहाँ वास्तवमा राजा नै हुनुहुन्थ्यो!
क्रूसमा येशू करिब ६ घण्टा बिताउनुभयो। यसको अन्ततिर उहाँले “मलाई _________ लाग्यो” भन्नुहुँदै पिउने कुरा माग्नुभयो (यूहन्ना १९:२८-२९)। फेरि पवित्र शास्त्रको अर्को खण्ड पूरा हुन आयो (भजनसङ्ग्रह ६९:२१ पढ्नुहोस्)। सबैले बुझोस् भनी एउटा कुरा ठूलो स्वरमा प्रस्टै उच्चारण गर्नका लागि येशूले त्यस पेय पद्धार्थबाट आफ्नो सुख्खा मुखलाई भिजाउनुभएको थियो शायद। [टिप्पणी: प्रभुले त्यतिखेर ठूलो स्वरमा एउटा कुरा उच्चारण गर्नुभएको थियो तर त्यसलाई गलत बुझिएको थियो। मत्ती २७:४६-४७ पढ्नुहोस्। तर अब उहाँले भन्न लाग्नुभएको कुरा यति महत्त्वपूर्ण थियो कि कसैले त्यसलाई गलत बुझेको उहाँ चाहनुहुन्नथ्यो।] पिउने कुरा लिनुभएको लगत्तै पछि उहाँ ठूलो स्वरमा कराउनुभयो र भन्नुभयो, “_________ भयो” (यूहन्ना १९:३०)। मत्ती २७:५० मा पढेर हामीले थाहा पाउँछौं कि येशूले ती शब्दलाई ________ स्वरले कराएर भन्नुभएको थियो। “पूरा भयो! सिद्धियो! सक्कियो! पिताले मलाई गर्न दिनुभएको काम मैले गरी सिद्ध्याएको छु!” (यूहन्ना १७:४ पढ्नुहोस्)।
हामीसित एउटा यस्तो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ कि, उहाँले नै सब गर्नुभयो, सब तिरिदिनुभयो, सब पूरा गरिदिनुभयो र हाम्रो मुक्तिका निम्ति आवश्यक सब काम पूरा गरिदिनुभयो। उहाँले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नुभयो (लूका १९:१०; यूहन्ना ३:१७; १ तिमोथी १:१५)! प्रभु येशूले भन्नुभयो, “पूरा भयो!” अनि उहाँद्वारा मुक्त गराइएको व्यक्तिले अब यसरी भन्छ, “यथेष्ट भयो! यथेष्ट येशू मर्नुभो, मेरो लागि मर्नुभो!” येशू ख्रीष्टले पूरा गर्नुभएको कामको महत्त्वलाई हिब्रूहरूको पुस्तकले बयान गर्दछ (हिब्रू १:३; ९:२४-२८ पढ्नुहोस् र हिब्रू १०:१०-१४ मा “एकैचोटी” भन्ने शब्दको प्रयोगलाई ध्यान दिनुहोस्)। क्रूसमा येशू ख्रीष्टले तपाईंको लागि पूरा गर्नुभएको कामका निम्ति के तपाईंको हृदयले “आमेन!” भनेको छ त?
क्रूसको दण्ड भयङ्कर डरलाग्दो मृत्यु दण्ड थियो। करेन्टले वा गोलीले वा गिलोटिन (गर्धन च्वाट्टै काट्ने मृत्युदण्ड) को दण्ड तुलनामा छिटो र पिडारहित मृत्युदण्ड हुन्थ्यो। सुसमाचारका लेखकहरूले ख्रीष्टलाई क्रूसमा टाँगिएको कुराको ज्यादै थोरै मात्र बयान गर्नु एउटा उल्लेखनीय कुरो छ। क्रूसमा ख्रीष्टले भोग्नुभएका घण्टौं लामो कष्टदायी पीडाहरूको एक-एक बयान उनीहरूले गर्थे होलान् भनेर हामीलाई लाग्न सक्थ्यो। उनीहरूले त्यसो गरेनन्। उदाहरणको लागि, यूहन्नाको बयान एकदम छोटो छ। उनले यति लेख्छन्, “… तिनीहरूले उहाँलाई __________________” (यूहन्ना १९:१८)।
हाम्रा मुक्तिदाता हाम्रो सट्टामा मर्ने क्रममा उहाँमाथि परमेश्वरकै क्रोध र इन्साफ बर्सिएर आयो। परमेश्वरले दण्ड दिनुपर्ने व्यक्तिहरू त हामी हौं। हाम्रा सिद्ध प्रतिस्थापकले हाम्रो सट्टामा त्यो डरलाग्दो दण्ड तिरिदिनुभयो। यही नै हो ख्रीष्टको मृत्युको साँचो अर्थ: ख्रीष्ट _________ _______________का निम्ति मर्नुभयो” (१ कोरिन्थी १५:३)।
सिपाहीहरू बीचको क्रूसमा आइपुग्दा येशू __________ ______________ देखे, तब तिनीहरूले उहाँका खुट्टा भाँचेनन् (यूहन्ना १९:३३)। येशू क्रूसमा ६ घण्टा मात्र रहनुभई मरिसक्नुभएकोमा के पिलातस छक्क परे (मर्कूस १५:४४)? ________। येशू साँच्चै मर्नुभएको थियो कि थिएन भन्ने कुरामा यदि कुनै शङ्का लाग्छ भने यूहन्ना १९:३४ ले सदाका लागि शङ्का निवारण गरिदिन्छ! त्यहाँ एकजना सिपाहीले के गरेका थिए? ________________________________________। त्यसो गर्दा येशू त मरिसक्नुभएको थियो (पद ३३) तर त्यो सिपाहीले जे गर्‍यो त्यसले यस सवालको टुङ्गो लगाउम मद्दत गर्‍यो। यदि येशू केवल “बेहोश” हुनुहुन्थ्यो र सिपाहीहरूले नजानेर उहाँ मरिसक्नुभएको ठानेका थिए भने पनि त्यो भालाको रोपाइले त उहाँलाई मार्ने नै थियो। कोखामा ख्रीष्टलाई जस्तै गरी भाला हानिएको कोही बाँच्दैन। येशू खासमा मर्नुभएको थिएन भन्नेहरू सत्य-तथ्यप्रति अन्धा भएकाहरू हुन्। [टिप्पणी: १ शमूएल १७:४९-५१ सित तुलना गर्नुहोस्। दाऊदले गोलियतको टाउको च्वाट्टै काटिदिँदा गोलियत मरिसकेका थिए, तर दाऊदले त्यसो गर्नुको कारण थियो गोलियत साँच्चै मरिसके भनेर सबैलाई देखाउनलाई। गोलियत साँच्चै मरेका छन् कि छैनन् भनेर कसैलाई शङ्का रहेको खण्डमा उनको काटिएको टाउकोले छिट्टै शङ्का निवारण गर्ने थियो।]
यूहन्नाको सुसमाचार लेख्‍ने व्यक्ति क्रूसकै छेउमा उभिरहेका थिए र उनले यी सबै कुराहरू आफैंले देखे (यूहन्ना १९:२५-२७ र १९:३५)। यूहन्ना यी सबै कुराका प्रत्यक्ष साक्षी थिए र उनले भने, “जसले यो _________, उसैले गवाही (साक्षी) दिएको हो, अनि उसको गवाही ________ छ” (यूहन्ना १९:३५)। यूहन्नाले कथा बनाएका होइनन्। प्रत्यक्षदर्शीको रूपमा उनले त्यहाँ साँच्चै भएका घटना लेखेका हुन्। यूहन्नाले यी कुराहरूले “तिमीहरूले __________ गर्न सक” (यूहन्ना १९:३५) भनेर लेखेका हुन्।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 14:18:132020-11-27 14:02:00परमेश्वरका थुमा (भाग २)
परमेश्वरका थुमा (भाग १)पुनरुत्थित् प्रभु (भाग १)